महिलाको पहिचानको मूल्य ज्यान !
– प्रतिमा सिलवाल–
पहिचान खोज्न पहल गर्दा महिलाले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्छ । कि त आफ्नो पहिचानको आधार नागरिकता बनाउनको लागि श्रीमानको निगाह कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
दबाब र हस्तक्षेपबाट प्रदेश सरकारमा कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत महिलालाई पुर्‍याउन सके अधिकारकर्मीलाई गुमाइसकेको साख फर्काउन टेवा मिल्नेछ । नत्र भने सरकार गठन भइसकेपछि महिलाको सहभागिता भएन भन्दै खेद प्रकट गर्नु हिन्दु संस्कारमा ‘लगनपछिको पोते’ सरह मात्रै हो ।
-सिर्जना बस्नेत –
आज भन्दा दश वर्ष अगाडी मैले अन्जानमै ठिक गल्ती गरेछु । बढ्दो उमेरसँगै शारीरिक परिवर्तन देखिन थालेको थियो । शरीरमा आएको परिवर्तनले दिमागमा प्रश्नहरुको फ्याक्ट्री बनाएको हुन्थ्यो । अरु साथीहरु आमाको काखमा प्रश्नको पोका बिसाउँथे । तर मसँग त्यो न्यानो काख थिएन ।
यसरी हेर्दा नेपालको कानूनले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाट नै न्यायिक प्रकृयालाई गर्भमा नै तुहाइन्छ भन्ने परिकल्पना नै नगरेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा भने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिहरू रकमको हिसाब किताबमा प्रहरीबाटै क्लिन चिट पाउँछन् । र, पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पारेर थप पीडा दिन्छन् ।
हामी नर्सको अर्को उपनाम बनिरहेको छ “छुच्ची”। यसो भन्नुअघि तपार्इंले सोच्नुभयो, ‘नर्स किन छुच्ची’ भनेर। अहँ, हो त्यही छुच्चोपनको उपाधीको दाहसंस्कार गर्नको लागि तेस्राे माग नर्स बिरामी अनुपातको माग राखेका छौं। के आफ्नो पेशाको गुणस्तर सुधार्न खोज्नु नाजायज माग हो ?
एउटै पुस्तामा हुर्किएका उहाँ जस्ता पुरुष अनि मभन्दा अघिल्लो पुस्ताका समाज परिवर्तनको सपना बाँड्दै हिँड्ने नेताले कहिले बुझिदिने होला, ‘महिलाहरूले आफ्नो अधिकार मात्रै खोजिरहेका छन् । पुरुषको अधिकार खोसेका छैनन् ।’
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उपहास नहोस्
२५ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ भने १३ जना महिला हुनैपर्छ । मौलिक हकको मूल मर्म यहि हो । यसो नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई नजिर बनाएर देशको जो सुकै नागरिकले सरकारका विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालत जान पाउँने कानुनी व्यवस्था छ ।
कसै–कसैका लागि राजनीतिक सफलताका लागि कुनै न कुनै पुरुषको हात हुनु सत्यको एउटा पाटो हुन सक्छ, तर अधिकांश महिला नेता भने ठूलो पीडा, कष्ट, हेपाइ र अपमान सहेरै राजनीतिमा स्थापित भएका छन् । यसर्थ उनीहरूका मेहनत, संघर्ष र क्षमतालाई बेवास्ता गर्नेगरी कुनै महापुरुषसँगको नाता नै विजयको आधार मान्नु पक्कै उचित र वस्तुसम्मत छैन ।